RIPPERS / THUMBS / RAKES Soosaarayaasha iyo Alaabada - Shiinaha RIPPERS / THUMBS / RAKES Factory
BONOVO ODM OEM PIN-ON suulka haydhka suulka qalabka mashiinada dhismaha
Bonovo Pin-on Suulka Haydarooliga loo habeeyay mashiin gaar ah. Si hufan ugu shaqeeya mashiinnada yaryar iyo sidoo kale mashiinnada waaweyn. Naqshad isku dhafan oo ku taal taarikada dhinacyada iyo faraha si loo helo awood dheeri ah, taxadarka farta Gaarka ah ee awoodda xajinta.
BONOVO Factory qiimaha calaamadeynta dhul nadiifinta cusub raajada ku dheji rakibo qodid 1-100 tan ah
Bonovo Rake waxay ku habboon tahay nadiifinta dhakhsaha badan, maareynta dhirta, kala sifeynta carrada / dhagaxyada iyo ka saarista geedaha aan loo baahnayn iyo baxda. Maaddada waa la sifeyn karaa oo la kala sooci karaa si loo nadiifiyo qashinka aan loo baahnayn oo looga tago ciid wanaagsan ama walxo gadaal ah. Labadaba jihada hore iyo hore.
BONOVO Backhoe suulka makaanikada ee jumlada iyo tafaariiqda
Bonovo Mechanical Thumb wuxuu bixiyaa hab wax ku ool ah oo la awoodi karo oo lagu maareeyo dhagxaanta, burushka, jirridda geedaha, tuubooyin iyo agabyo kale oo si fudud loo dhaqaajin karo. Soo qaado oo dhig sheyga adoo wada leh kontarool. Tani waa aaladda lagama maarmaanka u ah duminta, dhul nadiifinta iyo dhammaan howlaha gurashada. Farsamada, Haydarooliga, alxanka-on iyo nooca bolt-on oo dhan waa la heli karaa.
BONOVO Excavator iskuxiraha-suulka haydiga ee qodista qotada yar
Bonovo Link-on Haydarooliga Suulka loogu talagalay qaabka baaldiyadaada oo laga sameeyay bir xoog badan. Waxaa jira noocyo kala duwan oo la heli karo. 145 illaa 180 wareeg.
Bonovo cusub oo loo qaabeeyey oo leh hawl kale oo dhagax jabis ah oo ah 2 ilaa 85 tan ripper
Bonovo Rock Ripper wuxuu furi karaa dhagaxa cimilada, tundra, carrada adag, dhagaxa jilicsan iyo lakabka dhagaxa dillaacsan. waxay kadhigeysaa qodista carrada adag mid sahal ah oo wax soo saar badan leh. Rock Ripper waa lifaaqa ugufiican ee lagu gooyo dhul kasta oo adag, oo lagula kulmo deegaankaaga shaqada.
Bonovo Rock ripper waa in loo qaabeeyaa inuu jabiyo oo ka soo baxo dusha meelaha ugu adag si fudud oo u saamaxaya in si wanaagsan loo jeexo duruufo kala duwan. Tani waxay hubin doontaa in shanqadhaaga shanleyda ah ee maaddadu halkii aad ka jeexi lahayd. Taas macnaheedu waxa weeye waxaad fududayn doontaa, jeexitaan qoto dheer adiga oo aan culays badan saarin mashiinka.